အခြောက်ဆို အခြောက် – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » အခြောက်ဆို အခြောက် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
အခြောက်ဆို အခြောက် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Apr 7, 2014 in Cultures, Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 50 comments
ကေဇီ အခြောက် ယူမလားးးးးး
ဟင်? ဝေ၊ သများ အခြောက်မယူချင်ဘူးးး
ယူပါ ကေဇီရဲ့။ ကေဇီ အတွက် စပယ်ရှယ် စီစဉ်ထားတဲ့အခြောက်တွေ။
ငင်! ရက်စက်လှချည်လား ဝေရယ်။ ကေဇီမှာ ဘဲရှိတယ်လို့ ပြောပြီးပြီလေ၊ ဘီယာနဲ့ ပေါင်းတင် (အဲ) ပေါင်းတည်ထားတယ်လေ။ အခြောက်တွေမလိုချင်ဘူးးး ဟူးးး ဟူးးးးးး
၇ ရက်စာ တစ်ရက် အခြောက်တစ်မျိုး နွေရာသီစာ လေ။
ဟင်? ဘာရယ် နွေရာသီစာ?
အင်းလေ။ ငါးခြောက် အမျိုးမျိုးကို သင်္ကြန်တွင်း တပတ်စာ ရေးပေးထားတာလေ၊ ထမင်းဆိုင် အတွက်…
ဪ။ဟူးးးးးး! အဲဂလိုပြောပါလား ဝေရယ်။
သများက ကိုယ့် အတွေးနဲ့ကိုယ် လန့်တတ်လို့။
ဤကားးးး ကေဇီနဲ့ ဝေ သင်္ကြန်တွင်း တစ်ပတ် ထမင်းဆိုင်အတွက် ပြောနေသောစကားများပင်ဖြစ်၏။
ဘဝမှာ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်၊ ပိတောက်ဆို ပိတောက်၊ အခြောက်ဆို အခြောက် ကာရံလိုက်စေရန် ခေါင်းစဉ်ကို သုံးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အမှန်တော့ ဒီ ကာလ က လူသိပ် မရှိမှာ စိုးလို့ ကျနော် က သင်္ကြန်ပြီးမှ တင်ချင်တာကို
ဝေ က ရပါတယ်။ ပင်တိုင် ပရိတ်သတ်လည်း ရှိတယ်။ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ဖတ်မိမှ စီစဉ်လို့ ရမှာ ဆိုပြီး တင်ခိုင်းတာပါ။
ကျနော့ စားဖိုမှူးရဲ့ စေတနာကို နားလည်ရင် အားပေးကြပါဦးနော်။
ခြောက်ကြပါလေကုန် (အဲလေ) ငါးခြောက်များ အားပေးကြပါကုန်!!
အလွန်ပူပြင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ နွေရာသီမှာ ဟင်းချက်ဖို့ စီမံရတာ အလွန်ခေါင်းရှုပ်ရသော အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ဖို့မပြောနဲ့ ဈေးသွားဖို့တောင် တော်တော်ပင်ပန်းတဲ့အချိန်မို့လို့ ဖြစ်နိုင်ရင် အများကြီးဝယ်ထားပြီး ဈေးမသွားပဲ ကြံဖန်ချက်ပြုတ်ကြရတယ်။
ပူပြင်းလွန်းလို့ ခံတွင်းပျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲ အရသာရှိအောင် ချက်ပြုတ်စီမံရပါတယ်။
ဒီတစ်ပါတ်တော့ ငါးခြောက်ကို မျိုးစုံလုပ်ပြီး စားမြိန်အောင် စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ် …
ငါးရံ့ခြောက်၊ ငါးကွမ်းရှပ်ခြောက်၊ ငါးနီတူခြောက်၊ အာဗြဲခြောက်၊ ငါးမြွှေထိုးခြောက်၊ ငါးကြီးကြပ်တိုက်ခြောက်နဲ့ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အာလူး၊ ကြာဇံနှင့် တစ်ပါတ်စာခံနိုင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၀ယ်ပါမယ်။
သရက်ချဉ်သုတ်၊ ပဲကြီးဆူးပုတ်ချက်နှင့် အာဗြဲခြောက်ဖုတ်
သရက်ချဉ်သုတ်အတွက် ဈေးမှဝယ်လာတဲ့ သရက်ချဉ်ကို ကြက်သွန်ပါးပါးလှီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းပါးပါးလှီး၊ ဆီစိမ်း၊ ဆား၊ နှမ်းအနည်းငယ်နဲ့ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်ထည့်ပြီး သုတ်ပါမယ်။
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပဲကြီးနဲ့ ဆူးပုတ်ရွက်ကို ဟင်းရည်သောက်ချက်မယ်။
အာဗြဲခြောက်ကို ခေါင်းဖြတ်ပြီး ကင်စက်ထဲတန်းစီထည့်ကင်ပါမယ်။ အပေါ်မီး အောက်မီး ၂ မျိုးသုံးပြီး ၅ မိနစ်လောက်ကင်ရင် ကျက်ပါပြီ။ ကျက်တာနဲ့ ငရုတ်ကျဉ်ပွေ့နဲ့ထုပြီး ပဲဆီဆမ်းလိုက်ရင် စားလို့ရပြီ။
ဒီနေ့တော့ ဗမာထမင်းသုတ် (အစုံသုတ်) လုပ်စားပါမယ်။ နေ့လည်ပိုင်း ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်နဲ့ ရေနွေးကြမ်းတို့ဖြင့် အချိုတည်းပါမယ်။
တို့ဖူးအတွက် ပဲမှုန့်အစိမ်းမှုန့်နဲ့ တို့ဖူးကျိုပါမယ်။ (တို့ဖူးလုပ်နည်း တင်ဖူးပါတယ်)၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ပဲကြာဇံ၊ အာလူးပြုတ်မယ်။ ကျက်ပြီးသားထမင်းကို ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်ဆီသတ်ထားသောဆီဖြင့် အနီရောင်ဖြစ်အောင် နယ်ပြီးတစ်ပုံပုံထားမယ်၊ ကျန်တာတွေလဲ အနေတော်လှီးဖြတ်ပြီး တစ်ပုံစီပုံပါမယ်။ ဆီချက်အတွက် ကြက်သွန်နီဆီကျက်ကို သုံးမယ်။ ပန်းကန်လုံးတွေထဲမှာ မန်ကျည်းရည်၊ ငံပြာရည်၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်၊ ပဲမှုန့်၊ ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့်တို့ ထည့်ထားပါမယ်။
ဟင်းခါးအတွက် ဂေါ်ဖီဟင်းခါးချက်ပါမယ်။ ပုဇွန်ခြောက်နဲနဲ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့နှင့် ခပ်ကျဲကျဲလေးပဲ ချက်လိုက်မယ်။
စားချင်တဲ့သူက ပန်းကန်ယူပြီး လိုချင်တာအားလုံးထည့်ပြီး နယ်စားလိုက်ရုံပဲ…
ငါးခြောက်ရိုးကုလားဟင်း၊ ကြက်ဥအပြားကြော်၊ မြင်းခွာရွက်သုတ်
ငါးကွမ်းရှပ်အရိုးများကို ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်တို့နှင့် ဆီသတ်ပြီး အာလူး၊ ခရမ်းသီး၊ မုန်လာဥဖြူတို့နှင့်ရောချက်ပြီး ရေအနဲငယ်ထည့်ကာ နူးအောင်တည်ပါမယ်။ နဲနဲနူးလာတဲ့အခါမှာ မန်ကျည်းရည်ထည့်မယ်။ အားလုံးပြီးခါနီးမှာ ရုံးပတီသီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းနှင့် မဆလာထည့်မယ်။
ကြက်ဥကို အချပ်လိုက်ရအောင် ကြော်မယ်။ ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ နံနံပင်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကို ပါးပါးလှီးပြီး ကြက်ဥနဲ့ ရောမွှေပါမယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် အပြားလိုက်ဖြစ်ဖို့ နဲနဲခက်ခဲတာကြောင့် လျှို့ဝှက်ချက်အနေနဲ့ ဂျုံမှုန့် (သို့မဟုတ်) ကော်မှုန့် နဲနဲထည့်မွှေပြီးမှ ကြော်လျှင် ပုံစံမပျက် အပြားလိုက်ရပါမယ်။
ငါးရံ့ခြောက်ခရမ်းချဉ်သီးချက်၊ ပဲနီလေးကြာဇံဟင်းချို၊ သရက်သီးအစိမ်းပေါက်သုတ်
ငါးရံ့ခြောက်အသားကို အနေတော်အတုံးတုံးပြီး ရေစင်စင်ဆေးပါမယ်။ ကြက်သွန်ဖြူနီ ဆီသတ်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီးထားတာထည့်ပြီး ကျေအောင်အရင်ချက်မယ်။ ပြီးတော့မှ ငါးခြောက်အသားထည့်ပြီး ရေနဲနဲထည့်ပြီး ဆီပြန်အောင်ပြန်တည်မယ်။ ချခါနီးမှာ ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်မယ်။
သရက်သီးသုတ်ဖို့အတွက် သရက်သီးအစိမ်းအရွယ်လတ်လတ်တစ်လုံးကို ဓါးနဲ့ခပ်စိပ်စိပ်ပေါက်ပြီး အချောင်းသေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်လှီးပါမယ်။ ကြက်သွန်နီ၊ ဂေါ်ဖီထုတ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ ပါးပါးလှီးပြီး ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်၊ ဆီချက်၊ မြေပဲမှုန့်၊ ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့်တို့နှင့်ရောနယ်ပြီး သုတ်မယ်။
ငါးခြောက်ထောင်းကြော်အတွက် အသားများတဲ့ ငါးကွမ်းရှပ်ခြောက်ကို သုံးပါမယ်။ အသားမြောင်းတွေပဲရွေးပြီး ရေဆေးပြီး ပြုတ်ရမယ်။ ၁၅ မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးရင် အအေးခံပြီး အရေခွံနဲ့ အရိုးပါရင် သေချာအောင်ထုတ်ပြီး ထောင်းရပါမယ်။ စက်ရှိရင် စက်ထဲထည့်ကြိတ်လို့လဲရပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူနီ ပါးပါးလှီးပြီး ကြော်မယ်။ အဖတ်ဆယ်ပြီး အအေးခံရမယ်။ ကြက်သွန်ကြော်ထားတဲ့ဆီကိုကြည်ပြီး ငါးခြောက်အတွက်လိုသလောက်ချန်ပြီး ပိုမယ်ထင်တာတွေကို ဖယ်လိုက်ရမယ်။ ငရုတ်သီးခွဲခြမ်းအတွက် ကိုယ်တိုင်ထောင်း (သို့မဟုတ်) ရယ်ဒီမိတ်ဝယ် ၊ ဆီအိုးထဲထည့်ဆီသတ်ပြီး ငါးခြောက်ထောင်းထားပြီးသားထည့်ပြီး မီးအေးအေးနဲ့ ရေကုန်အောင်ကြော်ရပါမယ်။ အရသာကို မြည်းကြည့်ပြီးမှ ထည့်သင့်ပါတယ်။ သကြားနဲနဲထည့်ရမယ်။ ကျက်သွားရင် အအေးခံရမယ်။ ပြီးတော့မှ အအေးခံပြီးသားကြက်သွန်ကြော်ရယ်၊ ငါးခြောက်ထောင်းကြော်ရယ် ရောမွှေရမယ်။
ငါးနီတူကို ရခိုင်လိုသုတ်ပါမယ်။ ငါးနီတူအရွယ်တူလေးတွေကို ဒယ်အိုးထဲထည့်လှော်မယ်။ ပြီးရင် ငပိစိမ်းစားနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းရောထောင်း၊ မန်ကျည်းရည်နဲနဲ၊ တို့နှင့်ရောနယ်ပြီး နဲနဲပင် အပေါ်ကတင်လိုက်ရုံပါပဲ ..
တစ်ပါတ်လုံး ဟင်းချက်ရတာ မောနေပြီမို့လို့ ဒီနေ့တော့ ထမင်းကို အအေးခံပြီး ရေအေးအေးစမ်းလိုက်မယ်။ ငါးမွေးထိုးခြောက်ကြော်နဲ့ ရှလွတ်ရှလွတ်နဲ့စားလိုက်ရင် ရင်ထဲအေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဗိုက် ဆာပါတယ်ဆို မှဓာတ်ပုံပါ ပြပြီး နှိပ်စက်တယ်
ငါး ခြောက်ထောင်း ကြော်စားချင်တယ် ဗျို့
ထောင်းပေးရင် ကြော်ကျွေးမယ် တဲ့!
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး လန့်မသွားကြပါနဲ့ …
အခုလိုနွေရာသီမှာ အခြောက်တွေက အစိုထက်ပိုစားကောင်းတယ်နော် …
ဒီ စာကို အရင်ဖတ်ပြီး ဒီ အတိုင်း ဈေးဝယ်ထားလိုက်ပြီ။
ဒီမှာ သင်္ကြန် ပိတ်ရက် မရှိဘူး ပဲ။
သင်္ကြန်လေးရက်မှာ အဲ့ဟင်းစပ်နဲ့ ဆွမ်းကပ်ပါ
ဒီ လာ ဝတ် ရင် ကပ်မယ်
အခြောက်ဆိုအားလုံးကြိုက်… ဟင်းအခြောက်ကိုပေါဒါ… အတော်ပဲ သင်္ကြန်တွင်း ဟင်းစပ်ရဘီ.. ကျွိကျွိ
နိ ဟို အခြောက်ကြီး သတိရ သွားပလားးး
မဆုံစည်းခဲ့လေသော အ၆များ :byee:
ငါးခြောက်ဆို အသေကြိုက်သူမို့ သရေတမြားမြား ကျရပါကြောင်း
ကျနော် ပြန်လို့ ငါးခြောက်လက်ဆောင်ပေးမဲ့သူတွေ ဆိုမှာထားရတယ်။
ဒီ မှာ ဖုတ် ကင် (အဲလေ) ဖုတ်ရ ကင်ရ အဆင်မပြေလို့။
တခါတည်း လုပ်ပေးနိုင်မှ ပေးပါဆိုပြီးးးးး
မကြိုက်ပဲ အားပေးသွားတယ် ဆိုလို့ ကျေးကျေး အကြီးကြီး တင်။
ကျောင်းသားဘဝ ကွင်းဆင်းရပြီဆိုရင်… စခန်းမှာချက်တာက…
ငါးခြောက် + ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ငါးခြောက် + အာလူး ၊ ငါးခြောက် + သီးစုံ ၊ ငါးခြောက် + ….. မို့…
ရယ်အားထက် ငိုအားသန် သူကြီးအိမ်က ထမင်းဖိတ်ကျွေးတော့ တမြတ်တနိုးသိမ်းထားတဲ့…
ဟို တစ်ခေါက်ပြန်လာတုန်း က သများသယ်လာတာတွေလေ
ငါး ဖန်းမ ငါးပိကောင် ကို ခဲထားတာ
ဈေးမဝယ်ပဲ အာ့တွေ ဆက်တိုက်စားလိုက်တာ မက်နှာ အပ်ချစရာမရှိအောင် အဖုတွေ ပလုံစီလို့။
အ လှူ မ တိုင် ခင် ဒီ ပိုစ့် တင် ခဲ့ ရင်
ဒို့လဲ ခြောက် လိုက် ပါ တယ် ဟယ်
နောက် အလှူကျ ရင် ခြောက်ကြစို့ မွမွပြုံးးး
ဒီအပါတ်က သင်္ကြန်အတွက် ပြင်ဆင်နေကြတာနဲ့ ရုံးတွေ အိမ်တွေမှာ အလုပ်ရှုပ်ကြတယ် .. အဲဒါကြောင့် ငါးခြောက်ထောင်းကြော်လုပ်ထားလိုက်ပြီး ဒီတစ်ပါတ်တော့ အဲဒါနဲ့ အသီးအရွက် ပဲဟင်း ခပ်လွယ်လွယ်ပြီး လုပ်စားဖြစ်တော့မယ် …
ပုံထဲက ငါးခြောက်ထောင်းကြော်က ဒီအပါတ်အတွက် အမာခံဟင်းပေါ့ ..
သများ က တော့ အဲဒီ ငါးခြောက် နဲ့ ပေါင်မုန့် နဲ့လည်း စားတယ် ဝေ။
ဆီ အများကြီး မအိုင်အောင် ဘယ်လိုကြော်တာတုန်းဟမ်
ပုံကြည့်ရတာ မွမွလေး ဖြစ်နေအောင် ဘယ်လို ကြော်တာလဲ??
ကြက်သွန်ကြော်အရင်ကြော်တဲ့အချိန်မှာ ဆီများများသုံးတယ် .. ပြီးတော့မှ ငါးခြောက်အတွက် လိုသလောက်နဲနဲပဲချန်ပီး ကျန်တာခပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တာ … မီးအေးအေးနဲ့ ထောင်းထားတဲ့ငါးခြောက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ခြောက်သွားအောင် စိတ်ရှည်ရှည်လုပ်ရတာပေါ့ …
ကြောင်ကြောင်တို့ ကြွေးကြော်နေတာတော့ ကြာပြီပဲ။
သများ က ပဲ ကြောင်သား အရင် စားဖြစ်မလား မသိ။
ငါးနီတူးခြောက်ဝယ်ပြီးသားရှိတယ်။ ငါးခြောက်ရိုးရှိတယ်။ ငရံ့ခြောက်လက်ဆောင်ရထားတယ်။ အတော်ပဲ။ ငါးခြောက်ထောင်းကို ရန်ကုန်က အခြောက်ထောင်းမကြိုက်ဘူး။ တောအလှုတွေမှာကျွေးတဲ့ အစိုထိုးကိုပိုကြိုက်တယ်။ ကျေးကျေးမဝေ၊ ကျေးကျေး ချွိချွိ။ အဲလိုအီးဇီးကွတ်ကိုအင်မတန်ကြိုက်။ ထမင်းသုတ်ကတော့ သန့်စင်ပဲကောင်းပါတယ်။ အလုပ်ရှုပ်သက်သာလို့
ငါး သေးသေး လေးတွေ ဟာ က ငါး တူနီ ခေါ်သလားးး
ငါး နီ တူ ခေါ်သလား ယောက်ခမွ။
သများ အမှတ်မှားပြီ ထင်တယ်။
စနေနေ့ အစားအစာကို အခု တင်္နလာနေ့ မှာ
မီးလည်း အခြောက်ကြိုက်တယ်.. (နခြောက်)
ဒါနဲ့လေ မမဂျီးကြိုက်ရင် ခြောက်ကုန်တာဆိုတော့
ကင် စက် ဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာလဲဟင်..။ Air Frier နဲ့ အတူတူပဲလား..။
နောက်ပြီး ဆွမ်းမွှေး ကျောက်ကျော လုပ်နည်းတင်ပေးမယ်လို့ မဝေရေးဘူးသလားလို့..။
တင်ပြီးပြီဆိုရင်လဲ link လေး ပြန်ညွှန်းပေးပါလား..။ သင်္ကြန်နားနီးလာတော့ စိတ်ဝင်စားလို့ပါ..။ ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်။
ကင်စက်ဆိုတာ oven ကို ပြောတာပါ ..
ဆွမ်းမွှေးကျောက်ကျောလုပ်ငန်း မတင်ဖြစ်လိုက်ဘူး … မလုပ်တာကြာလို့ အချိုးအစားမေ့နေတယ် .. ပြန်ကြည့်ပြီး ရေးပေးမယ် ..
အဆင်ပြေရင် ပို့စ်တင်ပေးမယ် ..
အခြောက်ဆိုလို့ များတို့ တော့ ပါဘီ ဆိုပြီး အသဲအသန် ပြေးဝင်လာတာ
မားဖြစ် နေရတဲ့ အထဲ ငါးခြောက်လဲကြိုက်တတ်တော့
ကြာရင် တစ်ကယ် ပုန်းသွားနိုင်တယ်
မားစည်ရေ ဟောဒမှာ ကေဇီ ရယ် သများတို့ အကြောင်းတွေရေး နေတယ်တော့
ဆွေ တို့ စည် တို့ က အဲလိုတွေလားးး
အာ့ ဆို ပိုချစ်သွားပြီ။
သများက အခြောက်ဆို အကုန်ကြိုက်တာပဲ။
အ ခြောက် ဇာတ် သွင်းတယ်ပေါ့။
Sexy ဖြစ်လွန်းလို့ 
အခြောက်ကိုတောင် ဆက်ဆီဖြစ်သလေး ဘာလေးးးး
ရန်ကုန်က ငါးပုဇွန်အစို ဆိုရင် ညှီတယ်ထင်မိလို့ ငါးခြောက်ပုဇွန်ခြောက်ဆို အလွန်ကြိုက်မိလို့
ငါးခြောက်ပွဲရုံပိုင်ရှင်ကို သွေးသောက်ညီအမ ဖွဲ့ပလိုက်တယ်။
အခုလည်း ကေဇီ့ဆီ အခြောက်ကြိုက်သူများ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စာရင်းပေးပါတယ်။
အခြောက်ကြိုက် သူ တစ်ယောက် တိုးလာပြီ။
အီကိုကွတ် ဘယ်တော့လာမှာတုန်း ဟင်??
ခုတောင် ခိုင်ခိုင်ကျော် ဆိုတဲ့ မသာမနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးရယ်
နာ့ မောင်ဂလေး သနားပါတယ်။
ဆောဒီးပါကေဇီရေ…ဒီရက်ပိုင်းမပိတ်ခင် အလုပ်များရတဲပအထဲ သင်တန်းအချိန်ပြည့်သုံးရက်တက်နေရတာနဲ့
ငါးခြောက်မှာတော့ ငါးကွမ်းရှပ်ခြောက် ကိုအာလူနဲ့ရောပီး ဆီပြန်ချက်စားတာလည်းကြိုက်တယ်…
ငါးတံခွန်ခြောက်မီးဖုတ် ကြက်သွန်နီ၊ ငြုပ်သီးစိမ်းနဲ့သုပ်စားတာလည်းကြိုက်တယ်…
နန်းကြီးသုပ် ထည့်ပေးလိုက်မှ ခွင့်လွှတ်မယ် မိုက်မိုက်!!
မွေ့သွားလို့…အခြောက်ကြိုက် သူ တစ်ယောက် အဖစ်စါရင်းသွင်းပါဂျောင်းးး
မီးလည်း အခြောက်ကို ကြိုက်တယ်..
ဒါပေသိ.. နောက်ကျရင် တစ်ယောက်တည်းကြိုက်ရုံနဲ့ မရတော့ဘူးဆိုတော့ မေးကျိရဦးမယ်..
အဖြစ်က မနှစ်ကလို ဟုတ်တော့ဘူးလေ..
ဟိုကအခြောက်ကြိုက်ဝူး အစိုမှကြိုက်သဒဲ့ကွယ် ဟယ်ဟယ်ဟယ်
အိမ်ကအစ်မတွေက ငါးပိကောင်ကြော်တို့…ငါးခြောက်တို့ကိုရေနဲ့စားကြတယ်.. တခါမှ မစားကြည့်ဖူးဘူး.. သိပ်လည်းမစားချင်လို့… သကြန်တွင်းမှာ သများကတော့ ကုန်းဆင်းလိုက်လိုက်အုန်းမယ်.. ဧည့်သည်သွားလုပ်မှာမို့… ကျမလည်း ငါးခြောက်ကြိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် ပေါ့မှ.. ဆားငံတော့လုံးမစား… သီးစုံဟင်းတွေဘာတွေထဲ ငါးခြောက်ထည့်ချက်ရင်အရမ်းကြိုက်.. ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲ့ချက်လည်းကြိုက်.. ဟင်းစပ်တွေထဲ အခုစိတ်ထဲသရေကျမိတာတော့အသုတ်တွေပဲ.. :))
ငါးခြောက်ကို ဖုတ်ထားတာလွဲရင် ကျန်တာ သိပ်မစားဖြစ်ဖူးးး
ငါးပိကောင်ဆိုရင်တော့ ကြော်ထားတာ စားတယ်။
ခြောက်ခြောက်ချက်ထားတဲ့ ဟင်းကို ကြိုက်တယ်လို့ ပြောတာ။
ငါးခြောက်ကိုတော့ ငယ်ငယ်က သိပ်မကြိုက်ဘူး။
အသက်ကြီးလာမှ ဘာငါးခြောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုချက်ချက် ကြိုက်နေတော့တာ။
အခြောက်ကြိုက်သူ နောက်တစ်ယောက် လာပြီ။
ငါးခြောက်ဆို အရေခွံကို အရမ်းကြိုက်တာပဲ။
ဆိုတော့..ကြုံလို့.. ခြောက်ချင်တာလေးပြောရရင်.. ကိုရီးယားက.. ပဲပိစပ်နဲ့လုပ်တဲ့.. Meju ဆိုတာပါ..
မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ကင်လိုက်(ခြောက်လိုက်)ရင်.. ပဲပုပ်ခြောက်ပဲ..
တအိမ်လုံး တပါတ်လောက်အနံ့စွဲစေတာမို့.. မလုပ်ရဲ…။
တဂျီး ရဲ့ အခြောက် (အဲ) တဂျီး ပြောတဲ့ အခြောက်တော့ မစားဖူးသေးဘူးဗျ။
။ပဲ ပုပ် က တော့ အိမ်မှာနေတဲ့ စိုင်း ရဲ့ ညီမ တောင်ကြီးသူ လေး ပြန်တိုင်း (ကြွားးးးး) ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ မှာဖူးရဲ့။
ဒီမှာ ငါးခြောက် ရယ်ဒီမိတ် ကို ၇ ဒေါ်လာ ဆိုလို့။ ကြည့်လိုက်တော့ ကေဇီ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်:::: ထိုင်ဝါးလို့တောင် မရ။